I-ARIANA GRANDE: UPHENGULULO LWEALBHAMU ENTLE - IINDABA
Emva kweminyaka yokukhangela, uAriana Grande ufumene ilizwi lakhe lokwenyani. Iswiti I-albhamu yomculo pop, ephuma ngovuyo lwesitshixo kunye nothando olutsha.
Uhambo luka-Ariana Grande ukusuka kwinkwenkwezi yomntwana ukuya Ikhekhe lomntu Ukuba yindlalifa ebonakalayo kwitrone yetrayi kugxilwe ekufumaneni ingoma emchazayo. Nangona i-soprano yakhe iyaziwa kwangoko-isuka kwindawo enengqumbo yemililo ukuya kucula umlozi, i-elocution iyagwetywa-ukufumana yena kwii-hits bekubanzima ngamanye amaxesha. I-albhamu yakhe yokugqibela ezimbini, ngo-2014 Into yam yonke kunye no-2016 Umfazi oyingozi , zazomelele kodwa ziqhekeza umculo, zizaliswe ziindwendwe ezithandwayo kwaye zisindwa yintombazana yakhe embi eguqukayo. Ukuze uGrande anyukele kwinqanaba elilandelayo lokuyila, uya kufuna ngaphezulu nje koluhlu.
Iswiti , I-albhamu yokuqala yeGrande ukusukela ngebhombu yango-2017 kwikhonsathi yakhe yaseManchester, uziva ethembekile kwaye ehlukile kunanoma yimuphi umsebenzi wakhe wexesha elidlulileyo. Mhlawumbi ngenxa yentlekele inendlela yokuzityhila kwethu, inkwenkwezi eneminyaka engama-25 ekugqibeleni iyazivumela ukuba zithathe nje izinto njengoko zisiza. Akayinyanzeli imvakalelo yokukhathaza intliziyo kuyo yonke into kwiibhaladi ezililayo kunye nomyalezo-weengoma ezinzima, kodwa endaweni yoko uvumela uvuyo olusezantsi lomkhondo wethayitile ukuba uphume kwi-albhamu yonke. Ezona ndawo zibalaseleyo ze Iswiti Menze ajonge ithemba kwaye akhubeke kukukhanya kothando olutsha. Ngexesha lokufika kokungenelela malunga nomlingane wakhe ongumlingani uPete Davidson obizwa ngokuba ngu-pete davidson, apho igama elonwabileyo liphindaphindwe amaxesha angama-22 kwisithuba nje esingaphezulu komzuzu, nokuba yeyiphi na imifanekiso ethandabuzekayo yokubandakanyeka kwabo kwi-quickie enokuthi yenzeke phakathi Ifoto yeLollipop neengxelo ze Amandla amakhulu eDick Dick iwile kude. Vumela yung diva bathande ngoxolo.
indlu yaseJapan elungileyo ukuwa
UGrande ubhalele iingoma ezininzi kunesiqhelo (i-10 ngaphandle kwe-15) kwaye wenza ubudlelwane obucacileyo no-Pharrell, osebenza njengombhali wengoma kunye nomvelisi Iswiti ’Sisiqingatha esomeleleyo. I-funk-lite idiosyncrasies yakhe iseta ithoni eqaqambileyo kwaye inceda ukuphakamisa irekhodi lezakhiwo zomculo eziqhelekileyo. UGrande noWilliams bazishiyela igumbi elininzi lokudlala ngokujikeleza ngobunono ngeendlela, ngakumbi xa kufikwa kumazwi atyibilikayo kunye nomdlalo wokudlala. Cwangcisa nje kancinci kunokuba ukhefuzele, ucofe ulwimi, kunye nee-orbs zebhodi yezitshixo, i-REM ifumana iindlela zenoveli zeGrande yokwandisa irekhodi yakhe yezwi. Ukucula kumjelo wesimbo sokuqonda malunga nendoda emaphupheni ayo, ingena iphuma kwi-R & B crooning, i-doo-op vocal runs, ivangeli ehambelanayo, ukuthetha ngengoma, kunye nokuhamba ngokuchanekileyo okumangalisayo ('Scuse me, um?' Ndiyakuthanda / Ndiyazi ukuba ayisiyondlela yokuqala incoko, ingxaki). Akayidingi nephetshana lemali ukuze agximfize uphawu lwakhe.
Iingoma ezingezizo ze-Pharrell ziza ngoncedo lwentsebenziswano edlulileyo ye-Grande njengo-Max Martin, ILYA, kunye ne-TB Hits, kwaye ubukhulu becala bacofa impembelelo eqhubekayo yomgibe kwi-Top 40. Akukho namnye kubo ogcwalisa ngokuthe ngqo, kodwa yi-ode kwi-ex ex enetyhefu Lonke ixesha liphawuleka ukuba alikho loqobo-uhlobo lokwenza izigqibo gwenxa olusetyiweyo kwisothuso esiphezu kwazo zonke iitshathi. UGrande unemithetho yakhe emitsha, nangona: Uguqula umbono we-Imogen Heap kwi-blumming EDM twinkle ye-goodnight n go kwaye ajike ulusu lukaDrake kukucamngca ngoxinzelelo ngokuphefumla. Akukho nolwandiso ngqo lomsebenzi wakhe noWilliams, kodwa bobabini baziva ngathi bayalingana ngokwendalo kwi-albhamu konke malunga nokufumana ukukhanya.
I-Grande inokuthi ihambise i-albhamu epheleleyo ye-albhamu kunokuba i-juggernaut egcwele i-bangers, kodwa kukho ubuncinane umzuzu ochaza umsebenzi apha-ingoma ayifunayo, ehlanganiswe kwipakethe engabonakaliyo. Iswiti iphela ngokukhawuleza, uhlobo lwefom, i-ballad yomphefumlo wokuzinceda onokulindela ukujikeleza i-Beyonce opus. Nabani na owaziyo ukuba uGrande uziphathe kakuhle kangakanani iziganeko ezoyikisayo kumdlalo wakhe waseManchester kunyaka ophelileyo uyakuyiphendula ngokulinganayo impendulo yakhe emva kwale mvakalelo yakhe kule ngoma. Ukuhambisa onke amazwi aphikisanayo entlokweni yakhe, uGrande ucula ukubetha iingoma ezimnandi zentombazana ukuba yintoni engalunganga witchu buyela ezantsi. Uyazomeleza ngezinto zakhe ezintle, ukhuthaza abalandeli ukuba bakhathalelane, kwaye ngokuthozama aqinisekise ukuba nabani na angasebenza aye phezulu. Njengokuninzi kwe Iswiti , ingoma yomculo incinci kodwa iquka i-kaleidoscope yeetoni zezwi. Kulapha, ii-albhamu ezine, ukuba inyani yelizwi lakhe, kwaye ngokwandiswa kwakhe, idubula.
Utata john misty generic pop song
Izipikha ezingenazingcingo eziphathwayo
Esona sithethi seBluetooth silungileyo
Usuku lwealbhamu efileyo
owona manqaku aphezulu oscars ngo-2016